ဗြိတိန်နိုင်ငံကလေယာဉ်ကော်ပိုရေးရှင်း BAC 1-11 FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 28.4 ကို MB
downloads ရယူရန္ 14 681
Author: ဒါဝိဒ်သည် Maltby
သည် Bac 111 စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ပျံ။ အရည်အသွေးတစ်ဦးကအံ့ဩ။ ရှေ့နှင့်နောက်တံခါးများပွင့်လင်း။ မျိုးစုံ repaints ၏ရှေးခယျြမှု။ စုံလင်သောလေယာဉ်မော်ဒယ်။ အနီးကပ်လက်တွေ့ဘဝမှအမြင်အာရုံအခန်း။ အလှအပ "reverse" ၏အသံ။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်ယူ-ချွတ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမတိုင်မီစစ်ဆေးမှု-စာရင်းအပြီးအစီး။ သငျသညျ FS9 များအတွက်လက်လွတ်မသင့်ကြောင်းတစ်ဦးကလေယာဉ်! Compatibe မဟုတ် FSX.
ဗြိတိသျှလေယာဉ်ကော်ပိုရေးရှင်း 1-11 (သို့မဟုတ် BAC 1-11) ဗြိတိသျှလေယာဉ်တုံ့ပြန်မှု, Short-range ကို 1960 နှင့် 1970 ခဲ့သည်။ အဓိကကဗြိတိသျှထုတ်လုပ်သူ 1960 အတွက်ပေါင်းစည်းခဲ့ကြပြီးနောက်အမဲလိုက်လေယာဉ် (၌) ကဒီဇိုင်း, ကဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဗြိတိသျှလေယာဉ်ကော်ပိုရေးရှင်းကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ BAC 1-11 အ Vickers Viscount အစားထိုးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ သူကဒုတိယရေတိုခရီးရှည်သွားဂျက်လေယာဉ်ကို Sud လေကြောင်း Caravelle ဖြစ်ခြင်းကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုသို့ entry ကိုပိုမိုအကျိုးရှိစွာအင်ဂျင်၏ BAC 1-11 အားသာချက်နဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖိုအတွက်ကြီးမြတ်အတွေ့အကြုံကြောင့်။ ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်၎င်း၏ရောင်းအားပစ်လွှတ်မှာတဝက်နှငျ့အတူသူ့ကိုလူကြိုက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါ BAC 1-11 အအောင်မြင်ဆုံးဗြိတိန်ယာဉ်ကြီးနှင့်သူဖြစ်သောကြောင့်ဆူညံသံကန့်သတ်၏ဖယ်ရှားခဲ့သည်သည့်အခါ 1990s, သည်အထိဝန်ဆောင်မှုထားခဲ့ပါတယ်။